Sunga Seat Belt kana Duct Tape: Nyowani YeMhepo Yekuchengetedza Maturusi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Sunga Seat Belt kana Duct Tape: Nyowani YeMhepo Yekuchengetedza Maturusi
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Duct Tape: Iyo Nyowani YeMhepo Yekuchengetedza Yekushandisa
Zvakawandisa uye kazhinji, vatyairi vendege vasingadzoreke vari kudzikiswa nevashandi vendege vane tepi tepi. Uye nei? Yakasimba, yakachengeteka, ndosaka mai vemazuva ano vakangwara vakaudza vana vavo kuti: “Rongai tepi. Usabva pamba usina izvozvo. ”
Dheipi tepi yabvisa sekuenda-kune yekuchengetedzeka kwendege kwazvinonyanya kukosha kuti mufambi adziviswe.
Mumwedzi mumwe chete wapfuura wega, zviitiko zvinoverengeka zvakapa mukana wekushandisa tepi tepi kuchengetedza vekunze-ve-kudzora vafambi kuenda kuzvigaro zvavo.
Panogona kunge paine chiratidzo kune chakavanzika chekushandisa kunenge kuchangobva kuitika kwetiipi tepi mundege yevatakurwi.
American Airlines yakashuma svondo rino Chipiri kuti ingangoita awa mushure mekubva nendege kubva kuMaui kuenda kuLos Angeles, ndege iyi yaifanirwa kuendeswa kuHonolulu mushure mekunge mukomana ane makore gumi nematatu akanganisa.
Vapupuri vanoti mukomana akaedza kurova hwindo padivi pechigaro chake uye akazovawo nemuviri naamai vake chaivo. Makakatanwa akatanga kusimuka kweinenge awa mundege, zvichikonzera kuti mutyairi atendeutse ndege.
Ndege inotaura kuti zvivharo zvekuchinjika zvakashandiswa kudzora mukomana, asi vhidhiyo yakaratidzawo mushandi weendege achimubata pachigaro chake.
Ndege yakamhara zvakanaka, uye vafambi vakaiswa kune dzimwe ndege kana kupihwa makamuri ehotera.
Dhizaipi Tepi: Iyo Nyowani Yekubhururuka Yekuchengetedza Norm
Neimwe nzira, tepi tepi yabvisa sekuenda-kune yekuchengetedzeka kwendege uko kuri kwakakosha kwazvo kuti mutakurwi adzivirirwe kuchengetedzeka kweumwe neumwe mweya uri muchikepe. Izvo hazvibhadhare chero chinhu, inochengetwa zviri nyore pabhodhi pasina kutora chero yakaoma nzvimbo, uye yakasimba. Simba rakaringana kuita kuti mumwe munhu agare pasi - uye kana zvichidikanwa, nyarara - mukati menguva yasara yendege.
Patsamba inonakidza, mune yemuvhi Sista Act 2, mumwe wevadzidzi vari mumakwikwi evaimbi, Frankie, anoratidza Sista Mary Patrick jasi rake rakapetwa zipi uye anoti, "Chinhu ichi chakabvaruka! Zvino chii chandinofanirwa kuita, hu? ” Sista Mary Patrick vanopindura vakadzikama: “Teerera, usanetseke. Amai vangu vaigaro taura kuti hapana chinokona chero iwe uchitakura zvishoma kutenda kwako uye nemupumburu wakakura wematepi emagetsi. ” Iye anozopuruzira mupumburu wesirivha tepi tepi kubva mutsika yake uye anodhonza ruoko rwakakura rwetepi sezvaanoti, "Mhoro!"
Dzazvino Duct Tape Zviitiko
Ngatitarisei kumashure kwezviitiko zvenguva pfupi yapfuura yepakati pemhepo zvakaguma zvakachengeteka uye zvakachengeteka zvese zvinofanirwa ne iwo mashiripiti mupumburu wesirivha dhayeti tepi.
Musi waChikunguru 12, mukadzi pane imwe ndege yeAmerican Airlines kubva kuDallas-Fort Worth kuenda kuCharlotte akatanga kubhoorwa pabhodhi nemakumbo uyezve kuchigaro chake, apo izvo zvaive zvisina kukwana kumukunda mushure akaedza kuvhura musuwo mundege nekuti aisada kuti ikwire zvakare. Varindi vendege imwe yacho yakarumwawo yakamubata kuti achengetedze kuchengetedzeka kwevafambi mazana 190 vaive mungarava.
Musi waAugust 3, zvakanzi Maxwell Berry, murume ane makore makumi maviri nemaviri wekuOhio, anonzi akabata mazamu evashandi vaviri vendege panguva yeFrontier Airlines ndege ndokurova chechitatu. Vashandi vendege vakamubata-kumugarisa pachigaro chake parwendo rwese kubva kuPhiladelphia kuenda kuMiami. Berry akasungwa nemapurisa paakadzika panhamba nhatu dzebhatiri. Vamiririri veFBI panzvimbo iyi vakati havangateedzere mhosva dzemubatanidzwa.
Zvinoenderana neFrontier, iyo vashandi vendege vachatarisana nemhedzisiro yavo, kunyangwe zvisiri pachena kuti chii. Ndege yose yaifanira kutaura panguva iyi kuti: "Vashandi vendege vachange, sekudikanwa mumamiriro ezvinhu akadaro, kuzorodzwa pakubhururuka, vakamirira kuferefetwa."
Chinongedzo kuMavambo eDuct Tape Chakavanzika
Sangano reV Flight Attendants-CWA, iro rinomiririra vafambisi veFrontier, vakatsigira nemoyo wese zviito zvevashandi. Mutungamiri wesangano iri, Sara Nelson, akati vashandi "vakamanikidzwa kudzora mutyairi nematurusi avanowana."
Sekureva kwesangano, iyo ndege inopa tepi kune vashandi kuitira kuti vangangoda kudzora munhu anofamba. Frontier haana kupindura mibvunzo nezve izvo.
Sekureva kwepurofesa wezve manejimendi manejimendi yeMetropolitan State University yeDenver, Jeff Price, "zvakajairika kushandisa tepi tepi kuchengetedza munhu anomiririra kutyisidzira nendege kana vamwe." Akatsanangura kuti dzimwe nendege dzine zvimwe zvidzoreso mubhodhi, senge mafuru cuffs, uye akati anotakura zvese paanobhururuka "kungoitika zvakadaro."
Saka zvinoita sekunge zvine musoro kufunga kuti dzimwe ndege dzendege dzakanyarara "dzakaisa" marata etepi munzira yavo yekushandira nendege kuti dzikame uye chengeteke pasi pe 36,000 mamaira kumusoro. Ini ndaizofungidzira kuti hakuna vakawanda, kana varipo, vafambi vangaramba izvozvo.